Dezie-na-Ebe, Real-Oge Ule na Optimizely | Martech Zone
Igwe nyocha nke oge a siri ike ma nyekwa nghọta nke nwere ike ịkwanye nnukwu mmụba na ntụgharị mgbanwe. Ma ha enwebeghị mgbe dị mfe. Iberi ibe weebụ gị na ịtinye ederede ọ bụla adịghị atọ ụtọ. Nnwale siri ike chọrọ atụmatụ, mmejuputa ya na mmezu ya… yana mgbe nsonaazụ ya dị na ya, ị ga - eme ya ọzọ.
Scott Hoffman nke Sociocast gwara m ka m lelee Nke kachasị mma, azịza nyocha nke na-abanye kpọmkwem na saịtị gị ma nye gị ohere ịgbakwunye ma dezie ule kpọmkwem n'ime saịtị gị. Ga-ahụ ya iji kwenye ya:
Uru kachasị mma
Belata karama - Optimizely omume dị ka gị na-achọ oru otu, na nkà na ụzụ na-atụgharị gị okike mgbanwe n'ime ntabi-emepụta na-etinye koodu.
More ule, ọ dịghị nzuzo - Mgbe ịtinye otu akara koodu nke Optimizely mepụtara na HTML gị, ị gaghị emetụ ntọala koodu ahụ aka ọzọ - site ebe ahụ, ị ​​nwere ikike nnwale ozugbo, ụdị mgbanwe ọ bụla ị mepụtara nwere ike ịdị ndụ nye ndị ọbịa gị n'ime nkeji.
Sochie ihe dị mkpa - Soro aka, pịa, mgbanwe, ntinye aka, ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara gị na azụmahịa gị. Nlekọta ihe mgbaru ọsọ kachasị mma nke Optimizely na-enye ọtụtụ ọrụ enweghị atụ nke ị nwere ike ịkọwa.
Jide njikwa - Ewubere ikpo okwu kachasị mma maka ndị ọrụ nke ụdị niile, site na nnukwu ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ, obere azụmaahịa na ndị ọzọ. N'iburu nke a n'uche, ikpo okwu nwere nhazi na njikwa njikwa ọrụ - mepụta akaụntụ njirimara ndị ọzọ, hazie ọrụ ma lelee ngwa nnwale nnwale gị n'ime dashboard na-enweghị nghọta ma dịkwa mfe.
Nwalee na usoro gị na usoro iheomume - Nchọpụta dị elu, oke, na usoro nhazi oge na-enye mgbanwe kachasị ma na-enye gị ohere ịme ule na usoro gị. Hazie ule gị ka ị na-agba ọsọ mgbe ịchọrọ, lelee ule gị na ngalaba ndị ọbịa, wee chịkwaa oke nke ndị ọbịa gị na ọdịiche.
Na-arụ ọrụ na gị ẹdude usoro - Otu pịa ga-etinye Optimizely na nso nso nke ewu ewu nchịkọta Ngwaọrụ, dị ka SiteCatalyst, KISSmetrics, na Google Analytics, na Optimizely zuru ezu API ga-enye gị ike ijikọ data nyocha gị n'ụzọ na-enweghị ntụ n'ime ebe ọbụla ị họọrọ.
Ego ha ga-enweta ugbu a, kesaa ma emechaa - Mgbe ịchọtara ọdịiche na - emeri, ị nwere ike igbunye 100% nke ndị ọbịa gị na ọdịiche ndị ahụ, rue mgbe ndị ọrụ teknụzụ gị nwere ike itinye mgbanwe ndị ahụ na saịtị gị. Nke a pụtara na ị ga-eche na-emeghachi omume arụmọrụ arụmọrụ gị ule ekpughe, na-arụpụta ha na-amịpụta.
Multivariate na yiri ule - Optimizely si multivariate ule ike ka ị nwalee multiple mgbanwe dị iche iche na ngalaba na yiri, na-akpaghị aka na-ahụ ihe kasị mma n'ịgwa ilebara ihe mgbaru ọsọ gị anya.
Nke kachasị mma nwere ọnụahịa buru ibu nke ọnụahịa dabere na nlele peeji, yana onyinye Agencylọ Ọrụ siri ike.
Tags: ule ulennwale dị iche ichekachasị mmatesting